Alexander-Arnold oo shaaca ka qaaday kooxda uu ka taageero Spain & xiddiga uu jecelyahay Messi iyo Ronaldo – Gool FM
(Liverpool) 24 Mar 2020. Daafaca garabka midig ee kooxda kubadda cagta Liverpool Trent Alexander-Arnold ayaa shaaca ka qaaday kooxda uu aadka u jecelyahay.
Trent Alexander-Arnold ayaa si cad u sheegay inuu jecelyahay kooxda kubadda cagta ee Barcelona, isagoo dhinaca kale xusay inay tahay kooxda labaad uu taageero kaddib Liverpool.
Alexander-Arnold ayaa sidoo kale xusay kaddib wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Sport” Gobolka Catalonia ee dalka Spain inay suurtogal tahay inuu sii joogo kooxda Liverpool ilaa iyo inta uu ka fariisanayo ciyaarista kubadda cagta.
Daafacan reer England oo ka hadlayay jaceylka uu u qabo kooxdiisa Liverpool ayaa wuxuu yiri:
“Markii aan carruurta ahaa waxaan taageri jiray kooxda Celtic, laakiin hadda waxan jeclaan lahaa inaan sheego Barcelon waa kooxda aan ugu jeclahay kaddib Liverpool, waxaan dareemayaa iney leedahay qiimaha iyo aaminsanaanta ay halkan ku joogto Reds”.
Mar wax laga weydiiyay mustaqbalkiisa kooxda uu haatan joogo ee Liverpool, iyo suurtagalnimada uu ku sii jogi karo illaa inta uu ka fariisanayo ciyaarista kubadda cagta, ayaa wuxuu ku jawaabay, “Waan qiyaasi karaa taas.”
“Waligey kuma fikirin inaan ka ciyaaro Spain, waligey waxaan jeclaa Liverpool, oo aan taageeri jiray, waxaan mar walba u ciyaari jiray iyaga dartood, sidaas darteed ma jirto sabab aan ugu fikiro arrintaas”.
“Waxaan ahay ciyaartoy Liverpool ah, waxaana jeclahay kooxdan in ka badan wax walba oo kale, waxaan jeclahay taageerayaasha, sidoo kale magaalada, marka maxaan ugu fikirayaa arrintaas?.”
Ugu dambeyntii Trent Alexander-Arnold ayaa la weydiiyay su’aal ah xiddiga uu jecelyahay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo wuxuu ku jawaabay:
“Aniga ahaan waa Lionel Messi”.
Macallin Jose Mourinho oo la arkay isagoo caawinaya dadka uu saameeyay caabuqa Coronavirus